Khohlwa Ukutakula: ICoronavirus ingathola ukutheleleka okuphindwe kayishumi
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » Khohlwa Ukutakula: ICoronavirus ingathola ukutheleleka okuphindwe kayishumi
Kwakwaziwa futhi kwabikwa yincwadi yeTravelNewsGroup eyayivele ngoMeyi futhi yathula. Manje isazi saseMalaysia sishaya insimbi ye-alamu sithi:
Ubungozi bokutheleleka nge-COVID-19 bungaphakama izikhathi eziyi-10, ngokocwaningo olukhishwe namhlanje eMalaysia. IMalaysia ithole uhlobo olusha lwe-coronavirus olutheleleka ngokuphindwe kayishumi, kusho uDkt Noor Hisham bin Abdullah, udokotela ohlinzayo waseMalaysia osebenze njengoMqondisi-Jikelele Wezempilo kusukela ngoMashi 2013. Waziwa kakhulu ngokudlala indima evelele nevelele ekuholeni iMalaysia ukulwa nobhadane lwe-COVID-19.
Izindaba Zokubhebhana esivele ibikiwe mayelana nobunzima be-COVID-19 ngoMeyi ngokususelwa kwimibiko ye-Russian RT. Lo mbiko uchithiwe ngabezindaba zasentshonalanga.
ITravelWireNews (incwadi kadade eTurboNews) kubikwe ngoMeyi 2020: Ngasekuqaleni kukaMeyi ucwaningo, okwenziwa yiqembu elihlangene laseMelika nelaseBrithani eliholwa yiLos Alamos National Laboratory. Ikhishwe ngaphambi kokubuyekezwa kontanga 'njengesixwayiso sokuqala' kwabanye abacwaningi. Njengoba kumile nje, ososayensi abacwaninga nge-coronavirus emhlabeni wonke kungenzeka ukuthi babehlaziya ukulandelana kofuzo kohlobo oludala, ngakho-ke kubalulekile ukuthi babambisane naleli thimba ukuthola imininingwane yakamuva. "Ngeke sikwazi ukuvalwa amehlo njengoba sihambisa imijovo yokugoma kanye nama-antibody ekuhloleni kwemitholampilo," kusho umlobi oholayo uDkt Bette Korber, owaziwa ngomsebenzi wakhe nge-HIV.
Ngoba leli phepha alikabukezelwa ontanga, selishicilelwe ku-inthanethi kuseva ye-BioRxiv. Kodwa-ke, izincomo zososayensi abathintekayo ziphakamisa ukuthi lokho okutholakele kunengqondo futhi kufanele kuthathwe ngokungathi sína okukhulu - lo mbiko ungamakhasi angama-33 ubude, futhi mfushane ngokuhlekwa. "Lezi yizindaba ezinzima," kusho uKorber ngokutholakele.
Ushintsho, olubonwe kwezinye izingxenye zomhlaba futhi lwabizwa nge-D614G, latholakala okungenani emacaleni amathathu kwamane angama-45 eqoqweni eliqale kumnikazi wendawo yokudlela ebuya eNdiya futhi yephula indawo yakhe yokuhlala izinsuku eziyishumi nane. Le ndoda selokhu yagwetshwa izinyanga ezinhlanu ejele yahlawuliswa. Ubunzima butholakale nakwelinye iqoqo elibandakanya abantu ababebuya ePhilippines.
Udokotela wezifo zomzimba ophezulu wase-US uDkt Anthony Fauci manje uthi ukuguquka kwezakhi zofuzo okusha kungasheshisa ukusabalala kwe-coronavirus. Ubunzima bungasho ukuthi ucwaningo olukhona ngemithi yokugoma kungenzeka lungaphelele noma lungasebenzi ekulweni noshintsho, kusho uMqondisi-Jikelele wezeMpilo uNoor Hisham Abdullah.
“Ukuguquka kwezakhi ze-D614G kwenza ukuthi igciwane litheleleke kakhulu. Ingasabalala ngokushesha futhi ikhungathekise izinhlelo zokunakekelwa kwezempilo uma singayiphindi kabili imizamo yethu yokulawula, ”kusho uDkt Edsel Salvana
UDkt.Salvana unguMqondisi we-Institute of Molecular Biology and Biotechnology emaNational Institutes of Health eNyuvesi yasePhilippines Manila, futhi unguProfesa Wokuxhumana Nezokwelapha kanye noMxhumanisi Wezocwaningo eSigabeni Sezifo Ezithathelwanayo zoMnyango Wezokwelapha ePhilippine Isibhedlela Esikhulu. Ubuye futhi abe nguSolwazi Ohlanganyele Wezempilo Yomhlaba Wonke e-University of Pittsburgh. Njengamanje uyinhloko yekomidi elincane le-HIV lePhilippine Society for Microbiology and Infectious Diseases futhi wahola ekwakhiweni kwemikhombandlela yendawo yokwelashwa yokwelashwa kwezifo ezingosomathuba kwi-HIV. Ubuye futhi abe ngummeli wesikhungo kwiGlobal Fund Country Coordinating Mechanism.
Izinguquko ziye zaba yinto ehlukile eYurophu nase-US, kanti i-World Health Organisation ithi abukho ubufakazi bokuthi ubunzima buholela ezifweni ezinzima kakhulu. Iphepha elishicilelwe kuCell Press futhi lasetshenziswa njengesethenjwa sephepha locwaningo ngu UkuHukuHuku uthe ukuguquka kwezinguquko akunakwenzeka ukuthi kube nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwemithi yokugoma eyenziwayo njengamanje.
TUguquko lwe-D614G ku-SARS-CoV-2 ludume kabi ngalo ukukhuphuka kokubusa emhlabeni wonke. Lokhu kuguquka kuguqula i-amino acid endaweni engu-614, ukusuka ku-D (aspartic acid) kuye ku-G (glycine) - ngakho-ke, D-614-G. I-D614 yokuqala manje ingukuhluka kwe-G614. Umbuzo uwukuthi: Yimiphi imiphumela yempilo yangempela eyenziwe yilolu shintsho noma okuhlukile kwe-G614, ngokuya ngokudluliswa, ukuqina kwezifo, ukwelashwa nemithi yokugoma?
Esifundweni sangoJulayi esiphrintiwe ngo- Iseli, UDkt. Bette Korber, isazi sezinto eziphilayo esinamakhompiyutha, nesazi sezakhi zofuzo sabantu, nozakwabo e-Los Alamos National Laboratory bahlaziya ukulandelana kweSARS-CoV-2 kweziguli ezingama-999 e-UK. Imiphumela ikhombise ukuthi iziguli ezitheleleke ngokuhlukile kwe-G614 zinomthamo wegciwane ophakeme kakhulu uma kuqhathaniswa no-D614. Emasikweni amaseli womuntu esitsheni selabhu, uKorber et al. ikhombise ukuthi okuhlukile kwe-G614 kubonise ukwanda kokutheleleka kune-D614.
Covid-19 Europe Impilo HIV India Malaysia Medicine Inhlangano Philippines Ucwaningo Umphakathi World Health Organization
Ukungami eTel Aviv kusuka eDubai e-Emirates, kusuka e-Abu Dhabi e-Etihad kwenza iTurkey Airlines itatazele
I-Al-Qaeda Terror Attack e-Elite Hotel ibulale abangu-16, kwalimala abangu-28
I-Vagina Talk: I-Podcast Ephakamisa Abantu Ngezitho Zangasese